SoundCloud အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（40.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် SoundCloud - Play Music, Podcasts & New Songs
ဘယ်အရာကိုဂီတအတွက်လာမယ့်ဖွင့် SoundCloud ပေါ်တွင်ပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်🌟
SoundCloud ပို streaming service ကိုထက်ကချက်ချင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဘို့အဆိုသံကို upload လုပ်ဖို့မည်သူမဆိုအဘို့အဖွင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်အပုဒ်ကိုနားထောငျဖို့ပထမဦးဆုံး Be အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်သူချင်းပရိတ်သတ်များနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင်နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နှင့်တိုင်းကစား, တူ, repost နှင့်မှတ်ချက်နှင့်အတူဂီတ၏အနာဂတ်ထောက်ခံပါတယ်။
GET SoundCloud အခမဲ့:
- Access ကိုအကြောင်းအရာ
၏အများဆုံးကွဲပြားခြားနား catalog - ထွန်းသစ်စများနှင့်ထူထောင်အနုပညာရှင်များ, DJs များနှင့် podcasts ၏ Discover သန်းပေါင်းများစွာ
- အကြံပြုပုဒ် Get - ဘယ်နေရာမှာအခြား
အပေါ်အခြေခံပြီး - အသီးအသီးအမျိုးအစား
အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတသို့မဟုတ် podcasts တွေကိုအဘို့အ SoundCloud ဇယား Explore - Connect ကိုအနုပညာရှင်နှင့်သူချင်းနားထောင်
တိုက်ရိုက်အတူ - ပိုမြန်နှင့်အတူသစ်ကိုဂီတကိုရှာပါ - မည်သည့်အခါသမယ
အဘို့အဖွင့်စာရင်းများကို Create ပြတိုက်မှူးဖွင့်စာရင်းများကို
SoundCloud 200 ကျော်သန်းပုဒ်နှင့်အတူကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဂီတနဲ့ audio streaming များပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်အကြီးမားဆုံး hits ကိုနားထောင်နှင့်ဂီတအတွက်လာမည့်အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ ကမ္ဘာ၏တိုင်းဖန်တီးမှုထောင့်ကနေသန်း 20-ပေါင်းအနုပညာရှင်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်း။ DJ သမားအစုံ, လက်တာဝန်ယူထားသောဖွင့်စာရင်းများကို, ရီမစ်စ်နှင့်လွတ် - - SoundCloud တွင်သင်သည်ဘယ်နေရာမှာတခြားတည်ရှိကြောင်းဂီတရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးမှာည့်ကျဇယား-topping မှအယ်လ်ဘမ်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းလွှတ်ပေး
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးအကျယ် catalog ပေါ့ပ်အတွက်အကြီးမားဆုံး hits ရှိပါတယ်, hip-hop, rap, အီလက်ထရောနစ်, ကျောက်, Techno အမျိုးအစား, ဂန္, jazz နဲ့ podcasts တွေကို, ဒါပေမယ့်လည်းဤလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း sub-အမျိုးအစားများနှင့်သီချင်းတွေကိုသင်လာမည့်နှစ်တွင်အကြောင်းကိုကြားနာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်သည်။
SoundCloud Find နှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်အနုပညာရှင်နှင့်ပရိတ်သတ်နှင့်ပြတိုက်မှူးအတူတကွရှေ့ဆက်ဂီတယဉ်ကျေးမှုကိုတွန်းအားပေးရန်ကွဲသွားရင်ရှိရာသာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်နှင့်စစ်မှန်သောအချိန်အတွက်ထွန်းသစ်စအနုပညာရှင်တွေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့စူပါစတား ချိတ်ဆက်. နှင့် shared ခံရသူတို့ထဲကစက္ကန့်အတွင်း၎င်းတို့၏အသစ်သောသီချင်းတွေကိုနားမထောင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရေပန်းစားပုဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်-in ကိုဂီတကျွမ်းကျင်သူများကပို့စ်ဖြစ်ကြသည် playlists သင့်စီးအတွက်ဆင်းသက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်။
ထွန်းသစ်စများနှင့်ထူထောင်အနုပညာရှင်များအောင်မြင်မှုလောင်စာဆီ။ ပြဇာတ်, မှတ်ချက်နှင့် repost ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုကဲ့သို့တိုင်းနှင့်ဖန်တီးသူရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုတည်စေလှုံ့ဆျောမှုပေးသည်, မိမိတို့လက်လှမ်းမမီချဲ့ထွင်။ တိုင်းနားထောင်ပြီး subscription ကိုအားပေးနှင့်ရှေ့ဆက်ဂီတယဉ်ကျေးမှုကိုဖန်တီးတွန်းအားပေးဆက်လက်သူတို့ကိုဖွင့်, အနုပညာရှင်ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာ SoundCloud ထီအပေါ်ငွေကြေးပိုမိုဝယ်ယူခဲ့သည်။
SoundCloud Go ကိုအတူ
ပရီမီယံနားထောင်ဘို့ SoundCloud Go ကိုမှ Subscribe, သငျသညျနောကျတဂီတရဲ့အဘယ်အရာကိုအကြီးမားဆုံး hits မှစ. , SoundCloud ပေါ်မှာရှိသောလမ်းကြောင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရနိုင်သည်။ အော့ဖ်လိုင်းနားထောင်ခြင်းနှင့်အတူသင်သွားလေရာရာ၌သင်တို့နှင့်အတူအသင့်ရဲ့ဂီတကို ယူ. , ကြော်ငြာမနှင့်အတူနိုငျသညျ, ဘာမျှမသင်နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးပုဒ်များအကြားရပ်တည်။ သငျသညျအရည်အသွေးမြင့်အသံနှင့်အတူပင်ပိုမိုနီးကပ်စွာနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်အသံနဲ့ရူပါရုံကိုရနိုငျသညျ။
အဘို့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်န့်အသတ်အပုဒ် - ကြော်ငြာ-အခမဲ့နားထောင်
- သင်၏ subscription ကိုငွေရေးကြေးရေးအ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုစတင်နှင့်ကြီးထွားလာနေသောဖန်တီးသူ၏သန်းပေါင်းများစွာကိုထောကျပံ့ကူညီပေးသည်
- Save ကိုအော့ဖ်လိုင်းနားထောင်
များအတွက်န့်အသတ်အပုဒ် - Access ကိုအပြည့်အဝကက်တလောက်မျှမကြည့်ရှုနိုင်သော
SOUNDCLOUD GO - SoundCloud
အပေါ် > - အရည်အသွေးမြင့်အသံ
- - အခမဲ့ကြော်ငြာနားထောင်
Get သင့်စာရင်းပေးသွင်းထားငွေရေးကြေးရေး SoundCloud
အပေါ်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုစတင်နှင့်ကြီးထွားလာနေသောဖန်တီးသူ၏သန်းပေါင်းများစွာကိုထောကျပံ့ကူညီပေးသည် - ပြီးရင် $ 9.99 / လအခမဲ့ရက်ပေါင်း 30 ကြိုးစားပါ * https://blog.soundcloud.com
Facebook မှ: https://www.facebook.com/ *
SoundCloud ဘလော့ JOIN soundcloud
Tumblr သည်: https://soundcloud.tumblr.com
Instagram ကို: https://instagram.com/soundcloud
SoundCloud အင်္ဂလိပ်, ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ, ဒတ်ခ်ျ, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အီတလီ, စပိန်နှင့်ဆွီဒင်အတွက်ရရှိနိုင်
သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ: ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ https://soundcloud.com/pages/privacy
SoundCloud || Play Music || Podcasts & New Song || SoundCloud #shorts
Khit Thit Lu
ကြိုက်ပါတယ်။ ‌download ရရင်ပိုကောင်းမယ်
Sam Tung..win Tun.Vip.kyawok.Vip
Mg Kaung Myat DEC